Monkey D. Luffy/စရိုက် နှင့် ဆက်ဆံရေး | One Piece Wiki | FANDOM powered by Wikia
Monkey D. Luffy/စရိုက် နှင့် ဆက်ဆံရေး
စရိုက် နှင့် ဆက်ဆံရေး
စွမ်းရည် နှင့် စွမ်းအား
ဒီစာမျက်နှာကတော့ လူအကြည့်များတဲ့ နံပတ် ၁ Featured Article ပဲ။
"Monkey D. Luffy" Article ဟာ လူအများ စိတ်ဝင်စားသည့် Article ဖြစ်သည်။
Straw Hat Luffy (麦わらのルフ, Mugiwara no Rufi?)
Luffy ရဲ့ ပုံဟာ မိုက်ရူးရဲဆန်ပြီး အကြောက်အလန့်မရှိတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ရှိပါတယ်။  အဲဒီလို ဖြစ်ရတာကလည်း သူကြုံတွေ့ရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အကြောက်အလန့်မရှိ မိုက်ရူးရဲဆန်လာရတယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Luffy ဟာ သာမန် ကိစ္စလေးများကိုတောင် အံဩတကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဂဏန်းက ဒီဘက်ကျင်းကနေ ဝင်သွားပြီး အခြား တစ်ဖက် ကျင်းကနေ ထွက်လာတာမျိုးကိုတောင် တအံတဩနဲ့ ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ သူဟာ monster တွေကို သဘောကျပြီး သူ့ အဖွဲ့သား အနေနဲ့ လိုက်ပါဖို့ ခေါ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ Thriller Bark arc မှာဆိုရင် စကားပြောတဲ့ သစ်ပင်ကို သူနဲ့ အတူတူ လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ နောက်ပြီးတော့ သူ့မှာ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလည်း မရှိပါဘူး။ Nami အပြင်းဖျားနေတုန်းမှာ သူက အေးနေတဲ့ အစားအစာတွေကို ကျွေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး Zoro ဟာ Kuma နဲ့တိုက်ပွဲအပြီး ဖျားတုန်းကလည်း အဲလိုပြန်လုပ် ပြန်ပါသေးတယ်။ Zoro ပါးစပ်ထဲကို ဆာကေးတွေ အတင်းလောင်းထည့်ဖို့ ကြိုးခဲ့ပါတယ်။ Amazon Lily မှာလည်း ထွက်ပြေးဖို့ အစီအစဉ်ကို စဉ်းစားခဲ့တုန်းက သူ့ရဲ့ စဉ်းစားပုံတွေကို မှတ်စု အနေနဲ့ချမှတ်ထားပြီး သူဟာ အများကြီးကို မစဉ်းစားနိုင်ပါဘူး  ။ သူ့ရဲ့ ရိုးရိုးလေးပဲ တွေးတတ်တဲ့ စိတ်က Hancock ရဲ့ power ကို ခုခံနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်း သူထင်ထားတာက Foxy ရဲ့ power လိုမျိုး နှေးသွားမယ်ထင်ပြီး အဲလို တွေးလိုက်တာကြောင့် Hancock ရဲ့ power ဟာ မထိရောက်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ နားလည်လိုက်ရတာက သူဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ စိတ်သဘောထားရှိတာကြောင့် အထိရောက်ခဲ့မှန်း သိခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ သူနားမလည်တဲ့ အကြောင်းအရာက တစ်ယောက်ယောက်က သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးရင် သူပြောတတ်တာက "ထူးဆန်းတဲ့ အရာ" (mystery thing) လို့ ပြောတတ်ပါတယ်။ Dance powder ကိုလည်း ထူးဆန်းတဲ့ ပေါင်ဒါ ဆိုပြီး ခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
↑ One Piece Yellow - Grand Elements - Page 19, Luffy's height is given.
↑ One Piece Manga Chapter 599, Fake Luffy mentions his bounty is
↑ SBS One Piece Manga - SBS Volume 4, Fan questions: Why does Luffy have so little "nervousness"?
↑ One Piece Manga - Vol. 53 Chapter 517, Luffy attempting to think about his actions.
↑ One Piece Manga and Anime - Vol. 53 Chapter 518 and Episode 41, Luffy reacts to Hancock's powers thinking they are Foxy's Noro Noro no Mi instead.
Ship(s): Going Merry • Thousand Sunny • Shiro Mokuba I • Mini Merry II • Shark Submerge III • Shimashima Shopping • Karasumaru • Barrel Tiger • Rocket Man • Tarumanma • It's Okay
Individuals: Coby • Johnny • Yosaku • Nojiko • Genzo • Nefertari Vivi • Carue • Dorry • Brogy • Portgas D. Ace • Mr.2Bon Kurei • Gan Fall • Pierre • Conis • Pagaya • Aisa • Wiper • Kokoro • Chimney • Gonbe • Yokuzuna • Oimo • Kāshī • Keimi • Pappug • Hatchan • Silvers Rayleigh • Boa Hancock • Haredas • Heracles • Buggy • Mr.3• Emporio Ivankov • Inazuma • Crocodile • Jinbe • Mr. 1 • Surume
Organizations: Usopp's Pirates • Saruyama Alliance • Galley-La Company • Franky Family • Thriller Bark Victim's Association • Rosy Life Riders • Newkama Landers • Whitebeard Pirates and Allies • Heart Pirates
Anime: Akisu • Borodo • Apis • Ryu • Anaguma • Shuraiya Bascùd • Phoenix Pirates • Billy
Weapon Based: Clima-Tact • Usopp's Arsenal • Franky Schematics
Fighting Style Based: Haki • Santōryū • Black Leg Style • Fencing Style
Members: Monkey D. Luffy • Roronoa Zoro • Capone Bege • Jewelry Bonney • Basil Hawkins • Scratchmen Apoo • Eustass Kid • X. Drake • Urouge • Killer • Trafalgar Law
Fighting Style Based: Santōryū • Haki
Monsters: Ryuuma • Flare • Shirano • D.R. • The Dragon
Canon: Monkey D. Luffy • Buggy • Alvida • Miss Valentine • Mr.5• Nico Robin • Mr.3• Wapol • Mr.2Bon Kurei • Miss Doublefinger • Mr. 1 • Hina • Bellamy • Foxy • Blueno • Kalifa • Very Good • Shuu • Sharinguru • Brook • Gekko Moriah • Perona • Absalom • Bartholomew Kuma • Jewelry Bonney • Eustass Kid • Trafalgar Law • Capone Bege • Basil Hawkins • Scratchmen Apoo • Boa Hancock • Magellan • Emporio Ivankov • Inazuma • Edward Newgate • Jozu • Tsuru • Shiki • Marshall D. Teach • Blamenco
Filler: El Drago • Apis • Eric • Bear King • Noko • Bruce • Don Achino • Musshuru • Largo
Canon: Dalton • Tony Tony Chopper • Pell • Lassou • Miss Merry Christmas • Chaka • Pierre • Rob Lucci • Funkfreed • Jyabura • Kaku • X. Drake • Onigumo • Boa Sandersonia • Boa Marigold • Minotaurus • Minozebra • Minokoala • Minorhinoceros • Dalmatian • Marco • Epoida • Sengoku
"https://onepiece.fandom.com/my/wiki/Monkey_D._Luffy/%E1%80%85%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA_%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA_%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8?oldid=169" မှ ရယူရန်